Malunga nathi-iYantai Ishikawa yokuTywina iTekhnoloji Co., Ltd.
Yantai Ishikawa Ukutywina iTekhnoloji Co, Ltd.
Uhlobo lweSizwe oluPhezulu lwaMandla
IYantai Ishikawa Ukutywina iTekhnoloji Co, Ltd. (eyayisaziwa ngokuba yiYantai Ishikawa Gasket Co, Ltd., ekubhekiselwe kuyo njenge- "Inkampani") yasekwa ngo-1991 njengendibaniselwano phakathi kweYantai Asbestos Products General Factory kunye neJapan Ishikawa Gasket Co., Ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha kwiinkampani ezingaphezu kwe-70 e-China. Inkampani evunyiweyo yeJamani i-FEV kunye ne-Austrian AVL Consulting Inkampani ikwi-APEC Technology Industrial Park, kwiSithili seZhifu, kwisiXeko saseYantai, kwiPhondo laseShandong. Kukho abasebenzi abangaphezu kwama-500, kubandakanya ngaphezu kwe-100 iinjineli kunye namagcisa. Umzi-mveliso ugubungela ummandla we-74,000 yeemitha zesikwere. , Kubandakanywa indawo yokwakha yeemitha zesikwere ezingama-40,000.
Susa kwakhona inkxaso yezobuchwephesha
Ngaphezulu kweenkampani zasekhaya ezingama-70
I-FEV yaseJamani i-AVL yase-Austria
Ukuqinisekiswa kweenkampani zabacebisi
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, inkampani ihlengahlengise ubume bayo bemveliso kwaye yenze uhlengahlengiso lwangaphakathi, kugxilwe kwi-R & D kunye nophuhliso lweemarike zeemveliso eziluncedo kunye namathemba ophuhliso. Ngokusekwe kumgaqo "weemveliso ezifanayo, iinkqubo ezifanayo, kunye nentengiso enye", inkampani isebenzisa ngokupheleleyo izixhobo ezikhoyo Phantsi kwesiseko, thatha indlela yophuhliso lobungcali. Iindidi ezahlukeneyo zokutywina iigaskethi, iinxalenye zerabha, amakhaka obushushu, amaphepha okutywina ifayibha, amashiti agalelwe irabha kunye nezinye iimveliso ezenziweyo zaze zaveliswa yinkampani zisetyenziswa kakhulu kwizithuthi ezahlukeneyo, iimoto ezihamba abakhweli, iinqanawa, oomatshini ngokubanzi, petrochemical, amandla eshushu izitishi kunye nezinye iimfuno umhlaba otywiniweyo. NguSekela-Sihlalo we-China Friction Sealing Materials Association kunye ne-Vice-Sihlalo we-Multi-cylinder ye-Diesel ye-Injini ye-Injini yoMbutho weeNjini zangaphakathi. Yenye yeenkampani zasekhaya ezijolise kwimveliso yokutywina.
Inkampani yazisa itekhnoloji yaseJapan ye-Ishikawa kunye nemigca yokuvelisa, yetyiswa yafunxa iikhonsepthi zoyilo lwangaphandle kunye neenkqubo zokuvelisa, kwaye ngokuqhubeka ngokuzimeleyo okuzimeleyo, yaqhubeka nokugcina indawo yayo ekhokelayo kushishino kuphuhliso lwemveliso, ulingelo, ukuvelisa kunye nokuhlola. Inesakhono sokuphuhlisa ngaxeshanye nee-OEM zasekhaya nezangaphandle. Okwangoku, itekhnoloji yoyilo yenkampani, itekhnoloji yokuvelisa, kunye netekhnoloji yovavanyo iyaqhubeka nokuphucuka, kwaye iimveliso zayo ziyahlaziywa ngokuqhubekayo kwaye zandisiwe. Yakhele ilabhoratri etywiniweyo ekhokelwa ngumzi-mveliso, kwaye ihlala igcina amandla okuphuhlisa ngaxeshanye nomzi mveliso oyinjini. Ukhuphiswano oluphambili lwenkampani luye lwaphuculwa ngokuqhubekayo.
Ukulungiselela ukuziqhelanisa nenkqubela phambili yophuhliso lokhuselo lokusingqongileyo kwilizwe liphela, inkampani iyenze nzulu isicwangciso sophuhliso lwengcinga "yentsha" kunye "nokhuselo lokusingqongileyo", ibambelele kukhuseleko lokusingqongileyo oluhlaza kunye nococeko emsebenzini, kwaye yaqonda ii-non-asbestos kunye nentsimbi iimveliso zayo. Iimveliso ziyahlangabezana neemfuno zokukhutshwa okuphantsi kunye nokusebenza kwakhona, kwaye banoxanduva lokukhusela indalo kushishino. Uxanduva kwezentlalo. Kwixesha elizayo, inkampani iya kunika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zayo kwi-brand, itekhnoloji, uphando olusisiseko, iitalente, ulawulo, njl., Ngokusekwe kumgaqo "weemveliso ezifanayo, iinkqubo ezifanayo, kunye nentengiso enye", yenza ingxabano malunga Ukutywina, kwaye ngamandla ukwenza uphando olunxulumene nesicelo semveliso kunye nophuhliso lweemarike, Ukwandisa umgca wemveliso kunye nendawo yokuthengisa yeenjini zangaphakathi zomlilo, ifriji kunye ne-air-conditioning compressors, i-air compressors, i-petrochemicals, oomatshini ngokubanzi kunye namanye amashishini, kunye nokugcina inkampani igcinwe kunye nophuhliso olusempilweni.
Inkampani iyakuhlala ihambelana nefilosofi yeshishini lokugqwesa kunye nokuphuculwa okuqhubekayo, ibambelela kwixabiso lokudibana "lokusebenzela uluntu ngokutywina", ngokuthathela ingqalelo iinjongo zomdibaniselwano "wokutywina okuthembekileyo", nokunamathela kumbono wenkampani "wokukhokela Ukutywina ingcali kunye neshishini lodidi lokuqala naphakade ", Qhubeka nokugxila kwiimfuno zabathengi, uqhubeke nokuphuhlisa kunye nokwenza izinto ezintsha, unike abathengi izisombululo zokufaka uphawu olwanelisayo kunye neenkonzo, kwaye wamkele ngokufudumeleyo abathengi basekhaya nabangaphandle batyelele kwaye babakhokele.